Mu kọntinenti ahụ furu efu, akụkọ ifo ma ọ bụ eziokwu? - Afrikhepri Foundation
Mu kọntinenti furu efu
Mee ka mba ahụ furu efu, akụkọ ifo ma ọ bụ eziokwu?
Na-agụ: 11 min
Lakụkọ banyere mbibi Mu, ala nna mmadụ, bụ ihe ịtụnanya n'ezie. Ọ na-enye anyị azịza nke ihe omimi nke akara ọcha nke Oké Osimiri South ma na-akụziri anyị otu oke mmepeanya siri wee baawanye na etiti Oke Osimiri Pasifik, naanị ka ehichapụ ya kpamkpam n'otu ntabi anya. Afọ ole na ole gara aga, ndị ọkà mmụta sayensị ga-enwe obi abụọ na ịdị adị n'etiti Pacific nke nnukwu kọntinent dị ka Mu. Ma kemgbe ahụ achọpụtala akwụkwọ, atụnyere, nke na-egosi na mpaghara a dị. Ihe akaebe dị iche iche.
Nke mbụ enwere mbadamba ihe dị nsọ a chọtara n'ụlọ nsọ ndị India ma dezie ya na enyemaka nke onye ụkọchukwu maara ihe. Mbadamba ihe ndị a mere ka anyị hụperetụ Mu wee mee ka ndị nyocha ole na ole na-achọgharị gburugburu ụwa. Ndị Naacals na-asachapụ ha, na Burma ma ọ bụ na mba nna. Ha na-akọ otu Naacals si si na kọntinent a dị n'etiti Pacific. Ha na-akọkwa akụkọ banyere okike mmadụ n’ụwa a. Obere ihe odide oge ochie edere na Mayax, Egypt na India, na-akọwa mbibi nke ala Mu, mgbe ekpuchire ala ụwa iji mee ka kọntinent ahụ dum banye n'abyss nke mmiri na ọkụ. Mgbe ahụ mmiri nke Pacific mechiri n'ebe bụbu nnukwu mmepeanya.
Akwụkwọ ndị kwekọrọ
Mgbe ahụ enwere nkwenye na ịdị adị nke Mu na ihe odide oge ochie ndị ọzọ, otu n'ime ha dị ka akwụkwọ akụkọ Hindu Ramayana, nke onye ọkọ akụkọ ihe mere eme Valmiki dere n'okpuru iwu nke Narana, nnukwu onye nchụàjà nke ụlọ arụsị Rishi (dị nsọ) na Ayhodia, onye gụụrụ ya akwụkwọ ochie nke ụlọ nsọ ahụ. Valmiki na-ekwu na Naacals "si n'ala nna ha na ọwụwa anyanwụ wee bata Burma", ya bụ, site na Pacific Ocean. Akwụkwọ ọzọ kwadoro akụkọ nke mbadamba ihe dị nsọ na nke Valmiki; ọ bụ ihe odide Troano nke dị ugbu a na British Museum. Nke a bụ agadi ochie akwụkwọ Mayan edere na Yukatan. A na-akpọ ya "Ala Mu", na-eji otu akara nke Mu anyị na-ahụ na India, Burma na Egypt. Anyị ka nwere ntụaka maka Codex Cortesianus, bụ akwụkwọ Mayan nke nwere ihe odide Troano. Ma enwere akwụkwọ Lhasa, ọtụtụ narị edemede sitere na Gris, Central America, Mexico, na ihe osise eserese n'ọgba ndị dị na steeti ọdịda anyanwụ nke United States.
Site na Meksiko gaa Japan, na-eme ka akụkọ nhụsianya
N'ikpeazụ enwere mkpọmkpọ ebe, nke, site na ọnọdụ ha na akara ngosi nke chọrọ ha mma, na-agwa anyị maka kọntinent Mu, ala nna mmadụ.
Na South Sea Islands, ọkachasị na Mangaia, Tonga-taboo, Panape, Marianas na Easter Island, taa, anyị na-ahụ mkpọmkpọ ebe nke ụlọ arụsị ochie ndị mgbe ochie na nke ndị ọzọ nke monolithic oge Mu. Na Uxmal, Yucatan, ụlọ arụsị emebiri emebi na-ebu ihe ncheta ederede nke "Ala nke West, Ebe Anyị Si Bịa"; na Pyramid Mexico pụrụ iche, ndịda ọdịda anyanwụ nke Mexico City, ka ewuru, dịka ihe odide ya si dị, ka ọ bụrụ ncheta ncheta mbibi nke otu "Ala ọdịda anyanwụ" ndị a.
Ma mgbe ahụ, enwere ụwa niile nke ụfọdụ akara ngosi oge ochie na omenala ndị achọpụtara n'Ijipt, Burma, India, Japan, China, Pacific Islands, Central America, South America na n'etiti ụfọdụ agbụrụ North America. Ihe nnọchianya na omenala ndị a yiri nke na enweghị obi abụọ na ha nwere otu akụ: MU. Ihe a niile na-enye anyị ohere isoro akụkọ banyere mbibi Mu.
Nke a na kọntinent bụ a nnukwu Rolling larịị, agbatị n'ebe ugwu si Hawaii na ndịda. Uzo a dọtara n’agbata Easter Island na Fijis guzobere mpaghara ndịda ya. Ogologo ya karịrị puku kilomita asatọ site na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ, na ihe karịrị puku ise site na ugwu ruo na ndịda. Ejiri ala atọ mee kọntinent ahụ, ụzọ abụọ dị warara ma ọ bụ warara kewara.
Ogologo oge, ogologo oge gara aga, n'oge ochie - ọtụtụ puku afọ - mana na njedebe nke ihe anyị na-akpọ oge akụkọ ihe mere eme, e nwere nnukwu kọntinent dị n'etiti Oke Osimiri Pasifik ebe anyị na-enweghị ike ịhụ taa. hui dika oke osimiri na elu-igwe na obere agwaetiti nke anyi na-akpo agwaetiti nke South Seas.
Ọ bụ obodo mara mma nke ukwuu dị na mpaghara okpomọkụ, juputara na mbara ọzara. Ndagwurugwu na ala dị larịị na-eme nri, ahịhịa na-eto ma nwekwa ubi ndị a na-akọ ugbo, ebe ahịhịa ndụ mara mma na-ekpuchi ugwu ndị ahụ. Ọ dịghị ugwu guzoro na paradaịs elu ala a, n'ihi na a chụpụbeghị ugwu ndị dị ka eriri afọ ụwa.
Otutu obodo a bara ọgaranya nwere ọtụtụ osimiri na iyi, nke na-asọ n'etiti ugwu dị ala na ala na-eme nri. Ahia ahihia kpuchiri obodo ahu dum site na icho mma mara nma. Otu puku okooko osisi na-esi isi ọma gbara n’osisi na n’osisi; osimiri ndị ahụ nwere nkwụ nkwụ dị ogologo ma n'akụkụ osimiri ndị dị ogologo na-efegharị na ikuku. N’ime ndagwurugwu, osimiri ndị ahụ rụrụ ọdọ mmiri ndị gbara gburugburu bụ́ nke jupụtara na lotus ahụ dị nsọ. Nnukwu urukurubụba na-efegharị n'okpuru osisi, nnụnụ hummingbird na-amịkwa site na ifuru ruo ifuru, na-enwu dị ka ọla nwere nku na anyanwụ.
Otu ìgwè nke nnukwu behemoth na enyí na-awagharị n'oké ọhịa ndị na-enweghị atụ, na-efegharị nnukwu ntị ha ịchụpụ ụmụ ahụhụ na-enweghị mmasị.
Nde mmadu 64
Nnukwu kọntinent jupụtara na ndụ obi ụtọ nke mmadụ 64 (ihe odide Troano) chịrị kachasị elu. Zọ ndị sara mbara jere n'akụkụ niile, dị ka ọnyà ududo, na okwute ndị mechiri ha jikọtara ọnụ nke na ahịhịa enweghị ike itolite n'etiti mbadamba nkume (mbadamba Easter Island).
N'oge ahụ, ndị bi na 64 guzobere ebo iri, ma ọ bụ "ndị" dị iche na ibe ha, mana n'okpuru otu gọọmentị.
Ọtụtụ ọgbọ gara aga, ndị mmadụ ahọrọla eze ma tinye prefix Ra na aha ya. O mechara bụrụ onye isi ndị hieratic na eze ukwu n'okpuru aha “Ra Mu”. A kpọrọ alaeze ukwu ahụ Alaeze Ukwu Anyanwụ.
Onye ọ bụla na-ekwu otu okpukpe, na-efe Chi dị n'ụdị akara. Ha nile kwenyere na anwughi anwu nke nkpuru obi, nke mechara laghachi na isi mmalite nke o sitere.
Nnukwu nsọpụrụ ha nwere maka isi nke Chineke ka ha ghara ịkpọpụta aha Ya ma n'ekpere na arịrịọ ha na-agwa ya mgbe niile site na akara. "Ra Sun" bụ akara mkpokọta nke àgwà ya niile. Nnukwu Onye Nchụàjà, Ra Mu bụ nnọchiteanya nke Chi. Aghọtara na a gaghị efe Ra Mu ofufe, n'ihi na ọ bụ naanị onye nnọchianya.
Ndị mara ezigbo mma ma dị jụụ
N'oge ahụ, ndị Mu bụ ihe mmụta dị omimi na mmepeanya nke ukwuu. Enweghi mmebi iwu n'uwa, ma odighi adi, n'ihi na ndi nile no n'uwa bu umu Mu na n'okpuru ala nke ndi nna.
Agbụrụ kachasị na ala Mu bụ agbụrụ ọcha; ndị ahụ mara mma nke ukwuu, nwee akpụkpọ anụ mara mma ma ọ bụ nke dịtụ ntakịrị, anya ha dị nnọọ nro dị nro, na-achakwa ntutu ojii. Ewezuga agbụrụ ọcha a, enwere ndị ọzọ, nwere agba odo, aja aja ma ọ bụ oji. Ma ha achịghị ya.
Ndị a Mu bụ ndị ji obi ike na-akwọ ụgbọ na ndị na-akwọ ụgbọ mmiri na-agagharị ụwa n'ụgbọ mmiri ha site n'oké osimiri ọwụwa anyanwụ ruo n'oké osimiri ọdịda anyanwụ na site n'ebe ugwu ruo n'oké osimiri ndịda. Ha bukwara ezigbo ulo nke wuru nnukwu ulo uku na ulo eze ndi nwere okwute. Ha kpụkwara elu ma wuo nnukwu monoliths, dị ka ihe ncheta.
Enwere isi obodo asaa dị n'ala Mu, oche oche okpukperechi, sayensị na mmụta. Ma ọtụtụ obodo ukwu na obodo nta ọzọ gbasasịa n’ala atọ ahụ.
E wuru ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri n'ọnụ mmiri nke ụgbọ mmiri na-esi na ya gaa ebe niile, ebe ahịa na-aga nke ọma. Ala Mu bụ nnukwu obodo mmepeanya na azụmahịa; mba ndị ọzọ nke ụwa bụ nanị ógbè ya. Shipsgbọ mmiri ya na-ebu ndị njem na ngwongwo mgbe niile n’obodo dị iche iche.
Mgbe mba a dị ike nọ na njedebe ya, nke ọtụtụ ụlọ arụsị na ihe ncheta kpuchie, ọdachi dakwasịrị ya.
Umbda ụda na-ebili site na eriri afọ nke ala ọma jijiji na mgbawa ugwu mgbawa mebere akụkụ ndịda ya. N’akụkụ nile, oké ebili mmiri na-ekpuchi ala dị larịị ma rikpuo obodo ndị mara mma. Ugwu mgbawa ahụ gbara ọkụ, anwụrụ ọkụ na lava. Obodo ahụ dị larịị, lava ahụ asọghị kama ọ gbakọtara, na-akpụ pyramid nke mechara bụrụ nkume, nke a pụrụ ịhụ taa na ụfọdụ n'ime agwaetiti ndịda. N'ikpeazụ, ugwu mgbawa ahụ dajụrụ wee nwụọ.
Mgbe ọdachi ahụ gasịrị, ndị Mu kwụsịrị egwu ha. E wughachiri obodo ndị ahụ e bibiri ebibi ma nọgide na-adị ndụ.
Ọtụtụ ọgbọ mgbe ọdachi a gasịrị, mgbe echefuru ihe ahụ, Mu bụ onye ọzọ ala ọma jijiji. Eluigwe na ala dum na-efe ma na-agagharị dị ka ebili mmiri nke oke osimiri. Ala mara jijiji ma maa jijiji dị ka akwụkwọ osisi dị iche iche na égbè eluigwe. Pleslọ arụsị na obí eze daa, a kwatuo ihe ncheta na ihe akpụrụ akpụ. Obodo ndị ahụ bụ naanị mkpọmkpọ ebe. ” (Akwụkwọ Troano, Codex Cortesianus, na Lhasa Document.)
Ka ụwa na-ada ma daa, na-arị elu ma na-ama ụlọikwuu, ọkụ na-agbanye ọkụ na-agbapụta, na-agbapụ n'ígwé ojii ahụ na-enwu gbaa kilomita ise n'obosara. Ọkụ ọkụ ahụ na-enyo enyo nke na-agbapụ na mbara igwe. Anwụrụ ọkụ na-ekpuchi ụwa. Ọzọkwa, oké ebili mmiri na-ebuli mmiri na-agafe na mbara ala. Obodo niile na ndị niile bi na ha kwụsịrị na ebili mmiri.
Na a bustling bustle
Mgbe anwụ na-ada na-apụta n’elu mmiri n’okpuru blanket nke anwụrụ ọkụ ojii nke kpuchitere kọntinent ahụ nile, anyị chere na anyị hụrụ bọl na-acha ọkụ, nke karịrị akarị ma na-ewe oke iwe. Ke ini enye okosụk odude ke edem edere, ekịm ama ọtọn̄ọ ndikara, ọtọn̄ọde ke ini ke ini ke emịnen̄mịnen̄.
N’abalị, e bibiri Mu kpamkpam. Na ndakpọ nke apocalypse, ụwa a mara ikpe dara, na-enwu ọkụ n'ọkụ ala mmụọ "n'ime oke osimiri ọkụ" nke si n'aka ya weghara onye ọ metụtara. Mu na wadi mfe 64.
Ka Mu na-abanye n'ime abyss ya ọkụ, ike ọzọ wakporo ya, otu narị nde cubic nde na nde iri atọ! Site n'akụkụ niile, nnukwu ebili mmiri na-akụ. Ha zutere n'etiti etiti ụwa, ọ bụkwa Dantesque na-asụ ụfụ.
Na elu ugwu, taa agwaetiti ndị dị na Pacific
Mu, ala nna nke mmadụ, ya na obodo ndị dị mpako, ụlọ nsọ na obí eze, nka, sayensị na ọdịbendị, abụghị naanị nrọ nke oge gara aga. Mmiri bụ ihe mkpuchi ya. Mbibi a bụ mbido nke mbibi nke mbido mbụ na ụwa.
Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3 000, mbibi nke Mu kpuchiri ákwà a n'elu ụwa. Anyị na-amalite ibuli ákwà mgbochi a, ma a ka nwere ọtụtụ ebe zoro ezo.
Mgbe etinyere aka na mpaghara Afrika, ihe di iche iche na ala di iche iche di n'elu mmiri. Ha na-akpụ àgwàetiti na archipelagos, mana nke mgbawa ugwu gbawara ha.
Mgbe mmiri kpuchiri ụwa na ihe niile dị n’ime ya, mmiri dajụrụ, dị ka à ga-asị na afọ juru ya n’ọrụ mbibi ha, a na-akpọkwa mmiri ndị a taa Oké Osimiri Pasifik. Ọ dịtụbeghị mgbe aha a kpọrọ aha ya!
Ndị nwere obi ebere
N'agwaetiti ndị a furu n'oké osimiri nke ebili mmiri, ndị lanarịrị ndị bi na Mu zukọtara, na-echesi ọgwụgwụ nke oke ịma jijiji ahụ ike. Ha ahụwo ụlọ arụsị ha na obí ha, ụgbọ mmiri ha na okporo ụzọ ha na-apụ n'anya ruo mgbe ebighị ebi. Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na ndị niile bi na ha loro. Ole na ole lanarịrị ala nna nke mmadụ ghọtara na ha enweghị ihe ọ bụla, enweghị ngwaọrụ, enweghị uwe, enweghị ụlọ, obere ala, nri. Oke osimiri wee sie gburugburu ebe-obibi ha nile, ma n’elu igwe n’isi ha igwe ojii anwụrụ ọkụ, alụlụ na ntụ zoro n’anwụ enyi na enyi, na-emenyụ ìhè nile. Ibe mkpu arịrị nke ndị obodo ha ka nọ na ntị ha. Ọ bụ ọnọdụ ụjọ nye ndị gbapụrụ agbapụ mana a mara ha ikpe ịnwụ n'ihi agụụ na oyi. Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole lanarịrị ọdachi ahụ ma ọtụtụ nwụrụ nhụsianya.
Ugwu Oké Osimiri Ndịda bụ ihe fọdụrụnụ nke ala ndị a echekwara, ụfọdụ ndị bi na ha nwere ike ịsị na ha bụ ụmụ kpọmkwem nke ndị Mu.
Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, anwụrụ ọkụ na anwụrụ ọkụ na-emecha kwụsị. Anyanwụ rapuru ákwà mgbochi nke igwe ojii. Ndị nwoke na ndị nwanyị na-atụ ụjọ na-emeri agwaetiti ndị ọhụrụ ahụ, ndị nwere obi ụtọ na ha agaghị anwụ. Ọ ga-abụrịrị na ha nwere ezigbo obi ebere, ndị a na-alanarị oke mbibi kachasị n'ụwa!
Dakwasịrị na njakịrị kachasị ala
N'okpuru ọnọdụ ndị a, ọ dị mfe iche n'echiche ihe mere. Otutu site na ujo were buru ndi ozo, ndi ozo kpekwara ekpere ka onwu zoputa ha na nsogbu ha anagide. Iji dị adị, n'ụzọ dị mfe, ha nwere naanị otu ụzọ ha ga-esi mee: ị gbadata n'ime obi ịta mmiri na, nwa oge ọbụlagodi, na-eri ibe ha.
Akpukpọ aru nke umu anumanu, ma ọ buru na ọ di, akwukwọ osisi ndia gābu kwa ihe-nb onlyabà ha n'odinihu. Nkume, ube na àkú ga-abụ ngwa ọgụ ha. Ha kwesịrị iji shells na okwute rụọ ngwá ọrụ ha. Ma isi ihe, ọ bụghị nri? Obi abụọ adịghị ya, ọtụtụ nwụrụ n'ihi oyi, agụụ na ụjọ, ma mgbe ha nwụrụ, ozu ha bụụrụ nri maka ndị lanarịrị. Otú a ka iri anụ na anụ ọhịa si malite. Yabụ, ndị lanarịrị mmepeanya kasịnụ n'ụwa dabara na anụ arụ kachasị dị ala, nke na-aga n'ihu ruo taa.
Ofmụ nke Mu
3 ọhụrụ site na .20,05 XNUMX
1 ejiri site na 36,10
Zụta € 23,75
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 17, 2021 1:03
Mulatto na - amaka - Comic Strip (PDF)
Ihe okike na ihe omimi nke okike (PDF)
Koodu ihe omimi nke pyramid ahu - Robert Bauval (PDF)
Nmepụta ụlọikwuu nke na-emepụta ọkụ eletrik, ọkụ, okpomọkụ na ịntanetị
Okwu ego ndi Nelson Mandela (1994)